Cajalad-bireedka Aluminium Is-Dhaawacay |
Is-Dhaawaca Cajaladda Aluminium-ka
MEIYUAN waa soo -saare iyo soo -saare cajalad laga keenay Shiinaha.
Dhumucda cajalad-bireedka aluminium-ka-dhaawacan wuxuu u dhexeeyaa 30 micron illaa 75 microns, ballac 48mm, 50 mm, 100mm, iwm, dherer10m illaa 200m ama dherer kasta oo caado ah.
Cajaladda Aluminium-ka-Dhaawaca Aluminium-ka ayaa ah alwaax aluminium saafi ah oo jilicsan/PET-Foil Laminating oo ah kaalmeynta, oo lagu daboolay wax-qabad sare oo ku-saleysan/emulsion acrylic cadaadis-xasaasi ah oo xasaasi ah, iyada oo aan la sii deyn.
Is-Dhaawaca Is-Dhaawaca-kaas oo lakab kasta oo cajalad ah si toos ah ugu dul taal kan ugu dambeeya. Diiwaangelintu kuma jirto wax qumman. Dhaawaca is -dabarka ah ee Alluubka Aluminiumku waa bireed aluminium dhalaalaya oo dabacsan, oo leh cadaadis dhejis xasaasi ah. Foil waxaa lagu daaweeyaa hal dhinac oo silikoon ah si loogu sii daayo si fudud marka la nasto.
Awoodda gilgilashada sare, fududahay in la shaqeeyo, yareeyo qashinka iyo bay'ada u fiican; u fududahay isku -xidhka goobta, oo leh hufnaan isku -xidh oo hagaagsan, oo ku habboon isku -xidhka mashiinka.
Cajaladda dhejiska ah ee isku-dhafan alu ayaa loo isticmaali karaa noocyo badan oo dhejiska dhejiska iyo dayactirka.
Ku habboon hagaajinta finanka hiitarka ee qaboojiyaha iyo qaboojiyaha, iyo baabi'inta iyo gaashaaminta faragelinta hirarka elektromagnetic ee alaabada elektiroonigga ah ee kala duwan. Aad baa loo isticmaalaa.
Dhumucda Foil （µm）
Xirxirida Kubadda rogaya
S, Ma heli karnaa daabacaad caadiya?
Waxaan ku taageernaa adeegga OEM cajaladeena sida waafaqsan shuruudaha macmiilkayaga sannado badan.
S: Waa maxay cabbirrada loo baahan yahay si loo helo xigasho sax ah
Muuqaalka dalabka ee badeecada, dhejiska, wuxuu u baahan yahay warqadda dahaarka ah iyo haddii kale, dhumucda biraha aluminium, tilmaamaha iyo shuruudaha cabbirka, tirada aad u baahan tahay.
S: Waa maxay baakaduhu sida？ Ma la habayn karaa？
Baakadahayagu waxay noqon karaan sida waafaqsan shuruudahaaga, waxaan ku qalabaysan nahay 7 mashiinno baakad.
Hore: Cajalad -bireedka Aluminium
Xiga: Cimilada Qabow Aluminium -bireed
Cajalad Aluminium Dab -damis ah
Aluminium Tape -bireed
Cajaladda Aluminium -ka
Nooca -xidhka iyo mesh -ka oo ka kooban Cajalad -bireedka Aluminium
Aluminium Fiberglass Maro Tape
Cajalad -bireedka Aluminium oo la xoojiyay
Aluminium -bireed -Muraayadda Muraayadda Muraayadda, Intertape Polymer Group Aluminium -bireed, Sharooto, Fiilooyinka Aluminium ee Hal-dhinac leh, Wejiga Labaad ee Xoojiya Aluminium-ka Wajahaya, Sidee u Kululaan Kartaa Cajaladda Fiilooyinka Aluminiumka,